ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ - ဝီကီပီးဒီးယား
Pig influenza, swine flu, hog flu, pig flu
အီလက်ထရွန်မိုက်ခရိုစကုပ်အောက်တွင် တွေ့မြင်ရသော H1N1 တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုး။ ဗိုင်းရပ်စ်များသည် အချင်း ၈၀ မှ ၁၂၀ နာနိုမီတာ ရှိသည်။
ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ (အင်္ဂလိပ်: Swine influenza) သည် ဝက်တုပ်ကွေး ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစား တစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် ကူးစက်ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်သည်။ Swine influenza virus (SIV) သို့မဟုတ် swine-origin influenza virus (S-OIV) သည် ဝက်များတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်အုပ်စုဝင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျိုး ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ တွေ့ရှိထားပြီးသော SIV ဗီဇမျိုးများတွင် influenza C နှင့် Influenza A ၏ မျိုးကွဲများ ဖြစ်ကြသော H1N1, H1N2, H2N1, H3N1, H3N2, နှင့် H2N3 တို့ ပါဝင်သည်။
၅ ၁။ ဆက်သွယ်ရေး
ရောဂါဖြစ်ပွားသူ၏ ၁% သာသေဆုံးမှုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ရောဂါကူးစက်နှုန်းမှာ SARS ရောဂါ ထက်ပို၍လျင်မြန်သည်။
နှာရည်၊တံတွေး၊သလိပ်၊သွေး နှင့် လေထုထဲမှတဆင့်ကူးစက်နိုင်သည်။
လက်ကိုဆပ်ပြာ ( သို့ ) အရက်ပျံဖြင့်စင်ကြယ်စွာဆေးရန်။
ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါသည် မြန်မာပြည်တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် H1N1 (2009) တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ ရန်ကုန်မြို့တွင် သုံးဦးနှင့် ချင်းပြည်နယ်တွင် ၁၀ ဦးတွေ့ရှိရပြီး တစ်ဦး သေဆုံးကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
H1N1 သံသယလူနာ ၃၅ ဦးအား ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာ လူနာ ၁၇ ဦးတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားပြီး ဇူလိုင် ၂၆ ရက်အထိ သံသယ သေဆုံးလူနာအပါအဝင် သေဆုံးသူ လေးဦးအထိရှိသည်။
ရောဂါဘယဖြစ်ပွားသည့်အခါ သွားလာလှုပ်ရှားမှုများအား တားဆီးကန့်သတ်ချက်များ ချမှတ် ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမျိုးကဲ့သို့ အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာချိန်တွင် မိသားစုမှာ အတူတကွ ရှိချင်မှရှိနေပါလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်ပေရာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မည်သို့မည်ပုံဆက်သွယ်ကြမည်၊ အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် မည်သည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ကြမည်ဆိုသည်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်အရေးကြီးလှပေသည်။
ဆက်သွယ်ရမည့်လူပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ရောဂါဖြစ်ပွားရာ ဒေသ၏ ပြင်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အားသတ်မှတ်ထားပါ။ သို့မှသာ မိမိမည်သို့ရှိနေသည်ကို အခြားသူများက စုံစမ်းသည့်အခါ
ပြောပြနိုင်သည့် အဓိက ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါလိမ့် မည်။
မိမိ၏ ရုံးမှဖြစ်စေ၊ မိမိ အိမ်ထောင်ဖက်၏ ရုံးမှဖြစ်စေ ချမှတ်ထားရှိသော ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုများနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိနေအောင် ဆောင်ရွက်ပါ။
ပိုးသတ်ထားသော ပတ်တီးစထုတ်များ၊ အသေးရော အကြီးပါ။
အရက်ပျံဖြင့်ဖော်စပ်ထားသည့် ရေမပါသော လက်ဆေးရည်
ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတွင် သုံးသော အဖတ်များ
(ဆေးထိုးခါနီး သုံးသော ဂွမ်းဖတ်များ)
ကြက်ပေါင်သားဖြင့် လုပ်မထားသည့် ဆေးခန်းသုံး လက်အိတ်အလောတော်နှင့် အကြီးများ (စစ်ဆေးမှုသုံး လက်အိပ်များဟုခေါ်တွင်ပြီး ဆေးဆိုင်များတွင် တစ်ရာပါသော ကဒ်ထူဘူးများ
ဘက်တီးရီးယား ကာကွယ်ရေး လိမ်းဆေး
ကပ်ကြေး (အသေး၊ ကိုယ်ပိုင်သုံး)
မျက်နှာကာသောဒိုင်းကဲ့သို့ ဃဏျွ အရေးပေါ်အသက်ရှူကိရိယာ
၉၅ အမျိုးအစားမျက်နှာဖုံးစွပ် (ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းများနှင့်မှီခိုသူ များအားလုံးအတွက် တစ်ဦးလျှင် နှစ်ခုနှုန်းဖြင့်ရရက်စာ ပေးပါမည်။ နာမကျန်းဖြစ်နေသူများအားပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူများသာ ယင်း မျက်နှာဖုံးများကိုသုံးသင့်ပါသည်။)
အင်တစစ် (ဗညအခေငိ) (ဗိုက်နာလျှင် သောက်ရန်)
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသော ဆေးများ သိုလှောင်ထားပါ။
(ရေရှည် ကုသရန်အတွက် ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားထားသည့်ဆေးဖြစ်လျှင် သုံးလစာ ရှိနေပါစေ။) (အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုလည်း မမေ့ပါနှင့်)
မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး ဖျားနာခဲ့သည်ရှိသော် အသုံးပြုနိုင်ရန်အိပ်ရာ ခင်း၊ မျက်နှာသုတ်ပဝါ၊ ပလတ်စတစ်အိပ်ရာဖုံးစသည်များကို အပို ဆောင်ထားပါ။ လူမမာနေသည့်အခန်းကို
အိမ်ထဲ၌ မည်သည့်နေရာတွင် သတ်သတ် သီးသန့်ထားနိုင်မည်ကိုစဉ်းစားထားပါ။ ထိုအခန်းကို မည်သို့ လေဝင်လေထွက်ရှိနေစေမည်နည်း။ ထိုအခန်းမှ လေများ သည် အိမ်ပြင်သို့သာ ထွက်သွားရမည်ဖြစ်ပြီးအိမ်ထဲသို့ ထိုအခန်း ထဲမှ လေများ မဝင်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်မှာအရေးကြီးသည်။ ထိုသို့ရှိနေစေရန် မည်သို့ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုစဉ်းစားထားပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ ဗိုင်းရပ်(စ်) ခုခံဆေးဝါးများ ကိုရောဂါအခြေအနေအရ ကုလသမဂ္ဂမှ ပေးဝေပါမည်။
A/H1 N1 လို့ခေါ်တဲ့ ဒီဝက်တုပ်ကွေးဟာ ဝက်သားစားရုံနဲ့ မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။ ဝက်သားနဲ့ ဝက်သားထွက် ပစည်းများကို အပူချိန် ၇၀-ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်နဲ့ ချက်ပြုတ်ပါက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရှင်သန်မှုမရှိနိုင်တော့ပါ။ ကိုင်တွယ်တဲ့နေရာမှာလည်း သန့်ရှင်းစွာစနစ်တကျကိုင်တွယ်ပါက ရောင်းချသူများမှာလည်း ကူးစက်မှု မရှိနိုင်တော့ပါ။
A/H1 N1 တုပ်ကွေးရောဂါကူးစက် ခံထားရတဲ့လူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်တဲ့အရည်များ (နှာရည်၊ တံတွေး) စတာတွေဟာ မထင်မှတ်ဘဲ မသိလိုက်ဘဲ ကျန်းမာတဲ့လူရဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲကို ဝင်သွားပါက ရောဂါကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူသူထူထပ်လွန်းတဲ့ နေရာတွေကို မသွားသင့်ပါ။ အကယ်၍ မဖြစ်မနေသွားရမည်ဆိုလျှင်လည်း နှာခေါင်းစည်းတပ်ပြီး သွားလာနိုင်သလို ပြန်လာပါကလည်း လက်ကိုသေချာစွာ ဆေးကြာသင့်ပါတယ်။
လက်ဟာ ရောဂါပိုး ပျံ့နှံ့နိုင်ရာ ကြားခံဖြစ်တဲ့အတွက် လူအများနဲ့ ထိတွေ့တဲ့နေရာတွေသွားပြီးတဲ့အခါ လက်ကို သေချာစွာ ဆေးကြောသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ မိမိမှာ တုပ်ကွေးလက္ခဏာ ခံစားရပါက ရိုးရိုးတုပ်ကွေးလား၊ A/H1 N1 ရောဂါလားဆိုတာ သံသယရှင်းသွားအောင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။ မည်သည့်တုပ်ကွေးဖြစ်ပါစေ အဓိကမှာ မိမိမှာ ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအသောက်ကို စားခြင်း၊ ရေလုံလုံလောက်လောက် သောက်ခြင်း၊ အားကစား လိုက်စားခြင်းဖြင့် ကြံ့ခိုင်အောင်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
↑ International Committee on onomy of Viruses။ The Universal Virus Database, version 4: Influenza A။ January 13, 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ "Swine influenza" (2008). The Merck Veterinary Manual. Retrieved on April 30, 2009.
↑ H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါ သံသယရှိ လူနာ ၁၃ ဦးတွေ့ရှိ၊ ၁ ဦး သေဆုံး။ The Voice (ဇူလိုင် ၂၄ ၂၀၁၇)။ 25 July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ နေရိုင်း၊ ကျော်မျိုး။ H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားသူ ရန်ကုန်တွင် သုံးဦးနှင့် ချင်းပြည်နယ် မတူပီမြို့နယ်တွင် ၁၀ ဦး တွေ့ရှိပြီး တစ်ဦး သေဆုံး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် ကလေးသူငယ်များတွင် သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်သဖြင့် သတိထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပြောကြ။ Eleven Media။ 27 July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ အိသဉ္ဇာကျော်၊ လဲ့လဲ့အောင်၊ ဟေမာန်ဦး၊ ဝေလင်း၊ ငြိမ်းငြိမ်းသူ။ H1N1 သံသယလူနာ ၃၅ ဦးအား ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာ လူနာ ၁၇ ဦးတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး ဇူလိုင် ၂၆ ရက်အထိ သေဆုံးသူလေးဦးရှိလာ။ Eleven Media။ 29 July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ&oldid=704021" မှ ရယူရန်